Imisebenzi - Izinsizakalo Zezomthetho ZasePrairie
Izinsizakalo Zezomthetho ZasePrairie yindawo enhle yokusebenza
Siyayithakasela intshisekelo yakho njengomuntu ongaba yilungu labasebenzi. Uma ufuna ukuzibandakanya njengomuntu ongaba yivolontiya noma omunye umuntu, vakashela iPro Bono / Amavolontiya noma amaFellowship.
I-Prairie State Legal Services inhlangano yamasevisi ezomthetho enempilo futhi ehlonishwa kakhulu. Yasungulwa ngo-1977, iPrairie State inomlando oziqhenyayo wokuhlinzeka ngezinsizakalo zomthetho ezisezingeni eliphezulu kumakhasimende aswele. Sisebenzela izifunda ezingamashumi amathathu nesithupha enyakatho namaphakathi ne-Illinois. Ukuze siqinisekise ukuthi siyafinyeleleka futhi sinolwazi ngemiphakathi esiyisebenzelayo, sisebenza ngamahhovisi angu-11, anezindawo ezise-Bloomington, Galesburg, Joliet, Kankakee, McHenry (Woodstock), Ottawa, Peoria, Rockford, Rock Island, Waukegan, naseWest Suburban. .
Uzoba nethuba lokwenza umehluko.
Kunezikhundla ezahlukahlukene, kepha bonke abameli bethu bangalindela ukubandakanyeka kule misebenzi elandelayo:
Ukwenza izingxoxo zokudla namakhasimende, ukubamba iqhaza emihlanganweni yokwamukela nokuhlanganyela ekuhleleni amacala.
Ukunikeza iseluleko sezomthetho, izinsizakalo ezimfushane noma ukumelwa okunwetshiwe, kufaka phakathi ukuxoxisana namaqembu aphikisayo nabameli kanye namacala ezinkantolo kuzo zonke izigaba phambi kwezinkantolo zombuso nezombuso naphambi kwezinhlaka zokuphatha.
Ukunikezela ngommeli oqondile obhekana nezinkinga zesistimu, kufaka phakathi ukumangalelwa, kanye nommeli wezomthetho noma wokuphatha, njengoba kufanele.
Ukubamba iqhaza ezinhlelweni zohlelo lonke noma zombuso kanye / noma amaqembu asebenzayo kugxile ezindaweni ezikhethekile zomthetho.
Ukuzibandakanya emfundweni yomthetho yomphakathi.
Ukusebenzisana namaqembu omphakathi nezinhlangano zezenhlalakahle ukubhekana nezidingo zamakhasimende nokuvikela amalungelo abo asemthethweni.
Uzothola ukusekelwa nokuqeqeshwa kwekhwalithi.
Ukuletha izinsizakalo zezomthetho ezisezingeni eliphakeme kuqala ngabameli abanekhono eliphezulu. Uzothola ulwazi namakhasimende nasenkantolo, futhi njengoba uthuthukisa lawa makhono uzothola ukwenganyelwa kubameli abanesipiliyoni kanye nabaQondisi beMibango. Uzothola ukuqeqeshwa okuhle kakhulu, futhi amathuba amaningi okuqeqesha ayatholakala njalo ngenyanga. Abameli abasanda kwamukelwa bathola uqeqesho olunzulu lwe-Basic Litigation Skills.
Uzoba yingxenye yomphakathi.
Uzoba futhi nenzuzo yokusebenzela inhlangano enezinzuzo zonke zenkampani enkulu yabameli ngokusondelana nokushesha kwenkampani encane. Uzoba yingxenye yeqembu elikhethiwe nelisondelene lochwepheshe abazinikele abahlinzeka ngezinsizakalo zomthetho ezisezingeni eliphakeme. Amahhovisi ethu aqala ngosayizi kusuka kubameli abathathu kuya kwabayisishiyagalombili, nabasebenzi abahle kakhulu abasizayo. Kodwa-ke, ihhovisi lethu ngalinye liboshelwe komunye nomunye ngenhloso efanayo kanye nokuzibophezela ngothando ezimisweni zobulungiswa obulinganayo.
Sizibophezele ekuheheni nasekugcineni ochwepheshe abazinikele ekuphishekeleni umsebenzi wethu, futhi silwela ukuhlinzeka ngendawo yokusebenza evumelana nabasebenzi. Sinikeza iphakethe lezinzuzo ezehlukile kufaka phakathi:
Umshuwalense Wezempilo (kufaka phakathi izinzuzo zamazinyo nezombono)
Isikhathi Esikhokhelwayo Somusa (kufaka phakathi ikhefu labazali)
Ezinye izinhlelo zomsebenzi (kufaka phakathi amahora wokusebenza aguquguqukayo, amahora omsebenzi wesikhashana, kanye nokuxhumana ngocingo)
Ama-Akhawunti Wokusebenzisa Okuguqukayo (kufaka phakathi ukunakekelwa kwezokwelapha nokuncika)
Umshuwalense Wokukhubazeka Okufishane Nokuhlala Isikhathi Eside
403 (b) Uhlelo Lokulondoloza Umhlalaphansi
Izinkokhelo zobulungu beProfessional kanye ne-Bar Association
Amathuba emisebenzi, Rockford
I-Paralegal-New Leaf Project
Amathuba emisebenzi, Waukegan
Ummeli Wabasebenzi - I-COVID Response DuPage County
Amathuba emisebenzi, I-West Suburban
Ummeli Wabasebenzi - Izinsizakalo Zezisulu Zabahlukunyezwayo Basekhaya
Amathuba emisebenzi, I-Joliet
Umsebenzi Omusha Wokufinyelela Kwamaqabunga
Bloomington, Amathuba emisebenzi
Umholi wePro Bono Project
Bloomington, Amathuba emisebenzi, I-Joliet, Peoria, Waukegan
Amathuba emisebenzi, Ithuba Lomsebenzi
Amathuba emisebenzi, Woodstock
Ummeli Wabasebenzi - Ukutholakala Kwephrojekthi Yezobulungiswa
Ummeli Wabasebenzi - Uhlelo Lobulungiswa, Ukulingana, Nethuba
Ummeli Womphakathi - Uhlelo Lobulungiswa, Ukulingana, Nethuba
Amathuba emisebenzi, I-Joliet, I-Rock Island
amahora 24 edlule
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 28, kunjalo #UsukuLokuzijabulisaKukazwelonke. Siyazi kuqala ukuthi imisebenzi ingaba nengcindezi kakhulu. Ngakho-ke, wonke umuntu ufanelwe ukuzijabulisa okuncane emsebenzini ngezikhathi ezithile. Kungakhathaliseki ukuthi usebenza ekhaya noma usebenza nabanye, Usuku Lukazwelonke Lokuzijabulisa Emsebenzini isikhathi esihle sokuhlanganyela kuleli holide losuku lomsebenzi elijabulisayo. Yini oyihlelele ngoLwesihlanu? Singathanda ukwazi!	... Buka OkuningiBheka okuncane